1953-1967 Evinrude Johnson 3HP Akụ UP Project Part Numbers na Cost | Outboard Boat Motor Mmezi
1953-1967 Evinrude Johnson 3HP Akụ UP Project Part Numbers na Cost
Achọpụtara m na ihe nkedo NAPA nke ụlọ ahịa na-adọba ụgbọala na-enye ndị ahịa mmiri mmiri na mberede, na ha nwere ọtụtụ akụkụ mmiri ndị m chọrọ ka ha dị na NAPA Distribution Center. Ụlọ ahịa ndị ọzọ na-akwọ ụgbọala CarQuest nwere "Sierra Marine Parts Catalog" nke bụ otu ihe ahụ na nọmba NAPA. Ịchọta akụkụ ndị dị mkpa bụ ihe ịma aka, mana mgbe m matara ihe dị m mkpa, NAPA nwere ike iwepụta akụkụ ahụ ngwa ngwa. Ịchọrọ ịchọta ezigbo akụkụ akụkụ OMC Johnson / Evinrude na Mercury. Enweghị m mmasị ịzụta ihe dị na onye na-ere ụgbọ mmiri ma kwụọ ụgwọ ụlọ ahịa ha dị elu, ma e nwere ụfọdụ akụkụ mmiri ị ga-enweta ebe ahụ. Enwere ọtụtụ ebe na weebụ, mana ị ga-achọ ijide n'aka na ị maara na ihe ị na-azụ bụ n'ezie ihe ị chọrọ. Nsogbu ndị a na ndị ahịa a bụ na ha na-eche ihu na ị na-erere akụkụ maka ọtụtụ igwe.
Zụọ ahịa site na ịpị saịtị ndị e depụtara na ekpe. Chọọnụ Ihe Omume nke OMC ma tụnyere ego.
Ndị e depụtara n'okpuru bụ akụkụ ndị a na-eji na-akpọ 1963 3 HP Evinrude Lightwin Outboard Boat Motor. Enwere ezigbo ohere na ndị a bụ otu akụkụ ụgbọ mmiri ndị ị ga-achọ maka moto gị, mana ị ga-enyocha ọnụọgụ nọmba maka ọkọmpụta gị.
Total Cost maka Parts: $ 96.62 plus Tax na Napa
Coils (ịchọrọ 2 nke ndị a) OMC Nkebi Nhamba 582995 ma ọ bụ 584477, NAPA / Sierra Number Number 18-5181
Nyere aka na saịtị a:
Mgbanye Akụ-Up Kit Nọmba nke OMC 172522 NAPA / Sierra Part Number 18-5006
Onye mmeri J6C spak plọg
spak plọg Onye na-akwado J6C
Impeller Nọmba nke OMC 434424 NAPA / Sierra Part Number 18-3001
Head gasket Usoro OMC Nkeji 203130 NAPA Nkebi nke 18-3841-1
7 awa 23 nkeji gara aga
7 awa 28 nkeji gara aga
7 awa 38 nkeji gara aga